Sunday February 10, 2019 - 16:09:07 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Dowladdda Mareykanka ayaa sheegtay in ciidamo dheeraad ah ay udirayso xuduudda ay la wadaagto wadanka meksiko ee dhaca waqooyiga qaaradda amerika.
Wasaaradda difaaca mareykanka ayaa ku dhawaaqday in ciidamo gaaraya 3750 oo askari ay u daadguraynayso deegaannada xuduudda si ay uga hortagaan qulqulka qaxootiga ayna gacan uga geystaan dhismaha derbiga biraha ka sameysan ee laqorshaynayo in labada dal lagu dhereriyo.
Ciidamadan ayaan gaari doona deegaannada xuduudda koofur galbeed ee mareykanka iyo meksiko waxaana lasheegay in daad gureyntoodu ay qaadan doonto muddo sedax bilood ah, Pentagoonka wuxuu ku andacoonayaa in dirista ciidamadan ay qeyb ka tahay qorshe lagu xoojinayo ciidamada ilaalada xuduudaha iyo kuwa canshuuraha oo hadda tiradoodu noqon doonto 4350 askari.
Donald Trump ayaa markii uu u ordayay xilka madaxtinimada wuxuu ballan qaaday in uu xoojin doono ciidamada xuduudda meksiko ku sugan islamarkaana uu darbi dheer ku dhererin doono xuduudda si dadka soo galootiga ah ugu adkaato in ay dhanka mareykanka utallaabaan.
tallaabadan waxay imaanaysaa waqti azmo siyaasadeed ay ka dhax taagantahay xisbiyada dimuquraadiga iyo jamhuuriga oo ku aaddan lacagaha ballaayiinta dollar ah ee trump doonayo in loo ansaxiyo si uu ugu adeegsado dhismaha darbigan waxaana muddo 35 maalmood ah xanibnaa shaqada golaha xukuumadda mareykanka.